Xog Muhiim ah oo Ku Saabsan Cudurka Corona Virus iyo Sida Aad Ula Macaamilayso | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa Xikmado Iyo Tallooyin Ay u Baahantahay Naftaada -Ka faa’ideysi wacan
Maxamed Juxa, March 22, 2017
Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor, October 1, 2019
Habeen Kasta Seexo 8 – 9sac., Cabsidana Jooji
Waa Maxay Nasiibku? Waa weyddiin iyo fal-celinteedi.!
Cabdiraxmaan Cabdillaahi Adam, February 17, 2020
Xog Muhiim ah oo Ku Saabsan Cudurka Corona Virus iyo Sida Aad Ula Macaamilayso
Afrikaan.so — March 2, 2020
Cudurkaan ayaa markii ugu horeysay ka soo bilawmay dalka Shiinaha kadibna ku faafay caalamka intiisa badan. Kuuriyada Koonfureed, oo ah waddanka labaad ee Shiinaha kaddib uu saameynta ugu weyn ku yeeshay Caabuqa Corona.
Inta badan gobolada dalkaas ayaa laga furay goobo dadka gaadiidka wata ay isku baari karaan iyagoo aan gaarigooda ka dagin. Adeeggan, oo loo yaqaanno “Drive Thru”, ayaa inta badan lagu yaqaannay makhaayadaha mashquulka ah iyo meheradaha kale ee laga dukaameysto.
Qaar ka mid ah khubarada dhinaca caafimaadka ee caalamka ayaa sheegay in habka dardarta ku socda ee ay Kuuriyada Koonfureed ku baareyso Caabuqa uu yahay mid saameyn leh oo ammaan mudan. Waxay sheegeen in awoodda ay Kuuriyada Koonfureed u adeegsatay la tacaalista cudurkan cusub ay tahay mid aad u baaxad weyn oo ka wax tar badan dhammaan dalalka kale, oo uu ku jiro Mareykanka.
Ku dhawaad 70,000 oo ruux ayaa isbuucii lasoo dhaafay gudaha Kuuriyada Koonfureed looga baaray xanuunka loo bixiyay Covid-19. Dalka Japan ayaa tirada baaritaanka ee uu ilaa xilligaas sameeyay lagu sheegay qiyaastii 1,890, halka Mareykankana uu gaaray 445 baaritaan oo kaliya, sida ay sheegtay warbaahinta ABC.
Dr. Todd Ellerin, oo ah agaasimaha waaxda la tacaasha cudurrada faafa ee Kuuriyada Koonfureed, ayaa sheegay in tirada badan ee baaritaanka la sameeyay ay tahay mid lagu farxo.
“Waxay ila tahay in shaqo wacan la qabtay”, ayuu yiri Ellerin, wuxuuna xaqiijiyay saxnimada baaritaanka ka socda dalkiisa.
2Hadda waxaa lagu jiraa xaalad deg deg ah, taasina waa tallaabadii aan qaadi lahayn”, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Kuuriyada Koonfureed oo uu si ba’an u saameeyay Caabuqa Corona ayaa maantaoo Isniin ah soo tabisay 476 kiis oo cusub, taasoo tirada guud ka dhigeysa 4,212.
Waddankan ayaa laga xaqiijiyay 26 dhimasho oo uu sababay Corona. Gobolka Scotland ayaa dadaal xooggan ugu jira sidii uu uga hortagi lahaa inuu soo gaaro xanuunka dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay kasoo billowday waddanka Shiinaha.
Saynisyahanada wax baara waxay sheegeen in cudurkaan uu sababay cunista kibilayda. Sida sawirka ka muuqato waa gabar Shiinees ah oo kibay cunayso.
Isbuucii hore ayaa lagu soo warramay meel ka mid ah gobolkaas laga sameeyay baaritaan la mid ah midka ay sameysay Kuuriyada Koonfureed, kaasoo ah in dadka laga baaro caabuqa iyagoo aan gawaaridooda ka dagin. Scotland ayaa ah gobolka kaliya ee ka tirsan UK oo wali uusan gaarin Caabuqa Corona.
Tirada guud ee uu Caabuqa Corona ku dilay caalamka oo dhan ayaa gaartay 3,000 oo ruux, iyadoo Shiinaha kaliya laga soo tabiyay 42 dhimasho oo hor leh.
In ka badan 90% dadka dhintay waxay ku geeriyoodeen gobolka Hubei ee dalka Shiinaha, kaasoo ah meesha uu ka dhashay cudurkan cusub. Hase ahaatee waxaa jiray dhimashooyin kale oo laga soo tabiyay ilaa 10 waddan oo kale.
Iiraan ayaa maanta xaqiijisay 12 qof oo u dhintay xanuunkan, taasoo tirada guud dalkaas ku dhimatay ka dhigeysa 66 ruux. Waxaa dadka dhintay ku jira sarkaal sare oo ka mid ahaa la taliyeyaasha hoggaamiyaha sare ee Iiraan Ali Khamenei, sida ay warbaahinta Iiraan shaaciyeen.
Talyaaniga ayey ku dhinteen in ka badan 30 ruux, waana dalka ay saameynta ugu xun gaartay guud ahaan Qaaradda Yurub. Caalamka oo dhan waxaa ilaa hadda laga xaqiijiyay ku dhawaad 90,000 oo kiis. Caabuqan ayaa hadda dalalka kale ee dunida ugu faafaya si ka dhakhso badan sida uu ugu fidayo Shiinaha.
Waxaa la baajiyey boqollaal duullimaad. Waxaa go’doonsan dalxiisayaal badan oo qaar lagu karaantiilay hoteelladii iyo maraakiibtii ay ku tamashlaynayeen. Waxaa sagxadda u socda suuqyadii saamiyada caalamka, iyadoo ay dad badani dukaamada kasoo qaadanayaan kayd cunto, dawo, koleey warqadaha musqulaha ku tahay iyo waxyaabaha la isku ilaaliyo ee afka lagu xirto. Guud ahaan caalamkii waxaa ka taagan cabsi uu sababay cudurka corona ama Covid-19. Haddaba ka ogoow dhowr qodob oo muhim ah:
Sidee fayruskani kuugu dhici karaa?
Covid-19 wuxuu sida hargabka ku fidaa qufaca iyo hindhisada. Marka aad qaaddo wuxuu fayrusku ku noolaanayaa kuna tarmayaa nudayaasha hawa mareenka. Dhecaannada kasoo dhiiqa nudayaashaas – sida candhuufta, diifka iyo axalku – waxay wada sidaan fayruskii.
Marka uu qofku qufaco, hindhiso ama xitaa hadlo, waxay hawada ku yaacaya dhibco yar yar oo ili ma aragti ah, kuwaasoo fayruskii xambaarsan. Haddii aadan qofkaa u dhowayn, halis kuma jirtid, maadaama ay dhibcahaa yar yari kaliya gaari karaan ilaa 7 cagood oo qura ama ku dhowaad 3 tillaabo.
Qofkee u dhiman kara cudurka?
Waxay culimada caafimaadku isku raaceen in ay muhim tahay da’da qofka iyo cudurrada uu horay qofku u qabey. Tusaale, Covid-19 carruurta uu ku dhoco xitaa inta badan kamaba soo muuqdo, dalka Shiinaha oo uu cudurkani la degey, weli lama soo sheegin carruur iyo da’yar cudurka u dhimatay.
Walaaca ugu waynise wuxuu ka joogaa inay carruurtu cudurka u gudbinayaan waawaynka, taasina waa sababta ay maamulka iskuulladu u go’aansanayaan in iskuullada albaabada loo laabo. Marka la eego xogta waaxda kamaynta Cudurrada ee Shiinaha, heerka geerida cudurku wuxuu u dhexeeyaa 0.2% ilaa 0.4% marka ay timaaddo da’da u dhaxaysa 10 ilaa 50-jirrada, balse markasta oo ay da’du waynaato way sii dallacmaysaa boqolleeydu.
Tusaale, 50-meeyada heerka geeridu waa 1.3%, 60-meeyada waa 3.6%, 70-meeyada waa 8% ku dhan, 80-meeyadana waa 14.8%. Boqolleeydu waxay la kordhaysaa da’da, gaar ahaan haddii uu qofku qabo cudurro hore sida kansarka, dhiig karka, sonkoroowga, cudurrada sanbabka sida qaar-jeexa iwm. Xaaladda qofku waa sii xumaanayaan haddii uu qofkaasi qaado cudurka Covid-19.
Miyaan weji qaris ka xirtaa goobaha ay dadwaynuhu isku yimaadaan?
May, daraasaadku waxay muujinayaan in aanay taasi runtii kaa ilaalinayn inuu caabuqu kugu dhoco. Dadka qaar baa ku doodaya inay qofka ka caawinayso in aanu wejigiisa taataabanin, balse dad kale ayaa hubiyey inuu qofku in badan wejigiisa taabanayo. Sababta qura ee ay tahay inaad weji ama san-qaris u xiran kartaa waa marka aad adigu tahay qofka cudurka qaba, si aad uga badbaadiso inta kale. Dhanka karaantiilka iyo is karaantiilka uu qofku iskii u sameeyo.
Talada rasmiga ihi waxay tahay hadda: haddii aad booqatay gobolka Hubei oo ah midka looga arrimiyo Wuhan oo ah bar-bilowga uu cudurkani ka yimid 14-kii maalmood ee lasoo dhaafay, ama aad tagtay Iraan, woqooyiga Talyaaniga, Daegu iyo Cheongdo oo South Korea ah tan iyo 19-kii Febraayo, waa inaad wacdaa hay’aadka daryeelka caafimaadka, xitaa haddii aanad isku arag astaamaha cudurka Covid-19. Waxaa lagu fari karaa inaad is karaantiisho muddo 14-maalmood ah.
Tags: Xog Muhiim ah oo Ku Saabsan Cudurka Corona Virus iyo Sida Aad Ula Macaamilayso
Next post Ma Dhowrtaa Qalbiyada Dadka?
Previous post Bangiyada Islaamka: Milicsi Taariikheed